Abakhiqizi be-Glass Beverage / Jar Abakhiqizi, abahlinzeki - I-Glass Glass Beverage Bottle / Jar Factory
250ml matte black ingilazi juice isiphuzo ibhodlela nge-aluminium lid
Ibhodlela lethu le-250ml Clear Glass Juice lingasetshenziselwa ukufaka imikhiqizo eminingi ehlukene kubandakanya amajusi wezithelo, amanzi, ukuzamazama kobisi nokunye okuningi. Akunandaba nokuqukethwe kwakho, kuzobukeka kunesitayela nenhle kuleli bhodlela. Uma udinga ukufaka uphawu noma ukwenza ngezifiso amabhodlela akho, angabhalwa kalula ngolwazi lwemikhiqizo yakho. Ukwenza impilo yakho ibe lula kakhulu!
8oz 16oz umlomo ububanzi french isikwele ingilazi juice ibhodlela nge isivalo sensimbi
Leli bhodlela lilungele uhla oluphelele lweziphuzo. Cabanga nje ukufaka ubhamubhamu noma ijusi lewolintshi kula mabhodlela? Uma kuqhathaniswa neminye imidlalo, bazokwenza kahle.
Ingilazi engu-300ml yaseNew Zealand ekhanyayo ibhodlela lamanzi amaminerali eline-screw lid
Ibhodlela lengilazi elicacile le-500ml lilungele kakhulu i-soda noma amanzi amaminerali kanye nabathengisi beziphuzo ezisezingeni eliphakeme, izitolo ezinkulu nezinye izimboni. Ngenxa yokusebenza kwayo ngobuningi kanye nokwakheka kwayo kwakudala, kungasetshenziswa kuwo wonke amabanga ebhizinisi lakho lesiphuzo.
Amabhodlela obisi engilazi ayisikwele angama-1000ml 1 french ngesivalo sepulasitiki esiphazamisa
Leli bhodlela lobisi lwengilazi likulungele ukuphuza iziphuzo nganoma yisiphi isikhathi, kungaba iphathi, umshado noma ipikinikini. Lezi zinkulu ngosayizi, ngosayizi ofanele weziphuzo, futhi kulula ukuzihlanza! Futhi zifaneleke kakhulu njengomhlobiso noma njengezimbali zokubekwa kwetafula. Lawa mabhodlela wesitayela acacile "okuvuna" abuye eze nesivalo sepulasitiki esiwaphazamisayo esibenza balungele amaphathi nemikhosi noma izipho zokuthatha ekhaya. Ungazisebenzisa kaninginingi.
Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha,